လိင်: အ impuisssance ဆန့်ကျင်နေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • အကြံပြုချက်များ • အကြံပြုချက်များ Sant • ပုံမှန်မဟုတ်သော • လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: အ impuisssance ဆန့်ကျင်နေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်
လိင်: အ impuisssance ဆန့်ကျင်နေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့လှည့်ကွက်
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang 18 မတ်လ 2019
အဘယ်သို့ငါအကြောင်းဖြစ်၏ သငျသညျကိုပြောပြ အီးအက်စ်တီ အလွန် ရှက်စရာ။ ဒါပေမယ့်မိုင်းခံစားနေရပြီးခံခဲ့ရသည်အဖြစ်သင့်လိင်ဘဝခွန်အားမရှိခြင်းကနေကြုံတွေ့နေကြရသည်မှန်လျှင်, သငျသညျစာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လက်သင့်တယ် .
မင်္ဂလာပါလူတိုင်းအတွက်, ငါ့နာမကိုအကျယ်ချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း 56 ။
ငါသည်ငါ့ခင်ပွန်းကိုချစ်နဲ့ကျွန်မရှာတွေ့ပေမယ့် မယုံနိုင်လောက်အောင်တွန်းလှန် ငါရိုးရှင်းစွာအိပ်ရာအတွက်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့နိုင်ဘူး ဒါဟာ ... သူ့ကိုအရုပ်ဆိုးနှင့်မလိုလားအပ်သောခံစားရလုပ်နဲ့ကျွန်မယောက်ျားသည်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်များ၏အထင်အမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအကြောင်းအဆိုးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် ငါသည်ငါ့ပြဿနာနားမလည်ခဲ့ဘူး ။ အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပျက်သနည်း? ငါ၏အနှစ်ဆယ်ကျော်နှင့်ငါ့သုံးဆယ်တစ်လျှောက်လုံးငါခက်ခဲပြဿနာတစ်ခုမရှိခဲ့ဘူးခဲ့သည်။ တကယ်တော့,ကြှနျတေျာ့စစ်မှန်တဲ့ ပြဿနာခဲ့သည် ငါ၏အရှုးပင်ပျိုကိုထိန်းချုပ်ရန် ။ ငါလွယ်လွယ်ကူကူ, ငြီးငွေ့လာပြီမပါဘဲညဉ့်လုံးကြာရှည်နိုင်ကြောင်းနှင့်တစ်ကြိမ်အမြိုးသမီးမြားကိုခံစားကြဘူး, နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပင်သုံးကြိမ်။ အလွယ်တကူအမျိုးသမီးများနေ့တစ်ကြိမ်, နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်ပင်သုံးကြိမ်။
ငါထံသို့လာမှထင်ဘယ်တော့မှမ, ဒါပေမယ့်ငါပြု၏။ ငါဒါအပူတပြင်းခဲ့သည် ငါမရှေးခယျြမှုရှိခဲ့ငါ Viagra, Levitra နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့ဆေးပြားကြိုးစားကြရတယ်။ ဒါဟာသေချာ, ပထမဦးဆုံးမှာအနည်းငယ်ကကူညီပေးခဲ့ပေမယ့်ပြီးတော့ဒီလိုဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်ပျို့အဖြစ်ကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခြင်းစတင်ခဲ့သည်။ အာ။
ကအားလုံးကိုထိပ်, Viagra ရိုးရှင်းစွာမဟုတ်ပါ ခွန်အားမရှိခြင်းဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆေးတစ်လက် ။ ကမအားလုံးသည်ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖြစ်ပါသည် လေးနက်ပြဿနာယာယီဖြေရှင်းချက် : desensitization ။ ထို့အပြင်ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမသာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်လည်း ချစ်လှစွာသော ။ ငါပြဿနာများ၏အမြစ်ကိုရှာဖွေခဲ့ရတယ်။
ကိုယ့်ငါကဲ့သို့သောအဖြေတစ်ခုရှာသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသီများ, ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါငါဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်ဆိုပါစို့။ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသည်ကိုသင်သိလိုပေမယ့်ရှိပါတယ်မရ ခွန်အားမရှိခြင်းနှင့် desensitization ကုသပေးကြောင်းတစ်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့။
သငျသညျငါလာသောအခါဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ် ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့ထံသို့သက်သေပြ Que အဆိုပါနည်းလမ်းကိုတကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ် ။ ထိုညဉ့် ငါဒါခက်ခဲကြှနျုပျ၏မယား fucked သူမကခဲလမ်းလျှောက်နိုင်နောက်နေ့!
ငါသည်လည်းခွန်အားမရှိခြင်းခံစားနေရပြီးသူသည်ငါ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းကိုခေါ်နဲ့ကျွန်မသူ့ကိုပြောပြသည် ငါကြိုးစားခဲ့ဖူး ။ ပထမတော့သူကသံသယဖြစ်ခဲ့သည်, သူသည်ညာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖြစ်စေကယုံကြည်ကြ၏မဟုတ်ပေ။ သူကပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပြောလွန်းရှက်ပေမဲ့ငါသူသည်ငါ့ကိုထက် သာ. လိုတာပေါ့သိတယ်။
အံ့သြစရာ, ဒါကြောင့်လည်းသူ့ကိုအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် ! ထို့နောက်သူသည်သူငယ်ချင်းအချို့မှပြောဆိုသောနှင့်မျှမတို့အချိန်အတွက်ငါသူတို့ရဲ့လိင်အသက်တာ၌လိင်မှထမြောက်ဖို့သူတို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့မိသောကြောင့်ငါ့ကိုကိုးကွယ်သောပရိတ်သတ်များ၏သေးငယ်တဲ့အုပ်စုတစုရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မနှင့်အတူများစွာသောလူတို့သညျကိုကူညီနိုင်ထင် ဒီနည်းလမ်းကို ဒါနဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ် တိုတောင်းတဲ့ဗီဒီယိုက သူတို့ရဲ့ပျော့ကြက်အသက်ရှင်ခြင်း restore ဖို့ဘယ်လိုယောက်ျားတွေကိုပြသပါသည်။ သူတို့ကဒီကိုလုံးဝအခမဲ့ကြောင်းကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိဒါပေမယ့်ပိုပြီးလုံခြုံစိတ်ချစွာဖြစ်ပြီးကျနော်တို့အိမ်မှာကလုပျနိုငျသညျ့အခါကဤအမြိုးအစား၏ဝမ်းမြောက်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ!
စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့, ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှု ။ ယောက်ျား၏ delirious ထောင်ပေါင်းများစွာစေသည်ဘယ်အရာကိုရှာဖွေပါ။ တစ်ဦးကသိပ္ပံနည်းကျဖော်စပ်တစ်ချိန်ကအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့သင့်ခွန်အားမရှိခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မည်ဟုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
သငျသညျအကွေးနိုင်ခြင်းကြောင့်သင်တို့ကိုအနက်ရောင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရပ်တန့်။ သင်၏မယားသို့မဟုတ်ရည်းစားမှမုသာစကားကိုရပ်တန့်။ သင်သည်သင်၏ဆန္ဒမပြည့်စုံကြပြီမဟုတ်ကွောငျ့ရသေးအခြားစိတ်ရှုပ်စရာညဦးယံအချိန်ထဲကစိတ်ဖိစီးရပ်တန့်။ အစဉ်အဆက်နမ်းဖို့ Start! သငျသညျတဖနျမာနထောင်လွှားဖြစ်လိမ့်မည် ... သူမကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ်။
>> ယခုဗီဒီယို Watch နှင့်သင့်ခွန်အားမရှိခြင်းကိုပျောက်ကင်းစေ
ကျနော်တို့လှည့်ကွက်သည့် Pierce box ကိုတဆင့်သွားစရာမလိုဘဲသူမ၏ပုတီးနှစ်ဆတွေ့ရှိ
ကျန်းမာရေး PLUS MAG - တစ်ဦးကသူရဲကောင်းခွေးအန္တရာယ်များတဲ့ကလေးထိန်းနေတဲ့ကလေးကယ်တင်